Nandrolone Decanoate (DECA) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3)
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) poda, inozivikanwawo se19-nortestosterone, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) iyo inoshandiswa nenzira yeesters yakadai se nandrolone decanoate (zita rezita rinonzi Deca-Durabolin) uye nandrolonephenylpropionate (zita rinonzi Durabolin) .
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) video
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) Tsanangudzo
Raw Nandrolone Decanoate powder hapana mubvunzo kuti yechipiri-inonyatsozivikanwa injectable steroid mushure meTesttosterone. Ichi chinonzi anabolic chikamu chakaverengwa seimwe yemishonga yakanakisisa yekuchengetedza hutendere hwemaviri uye kukurudzira chido. An anabolic androgenic steroid yakave yakagamuchirwa zvikuru pakati pevashandi vemasangano nevatambi.
Pakutanga yakagadzirirwa kurapa vanhu vakaonekwa kuti vane musuru inoparadza zvirwere, Raw Nandrolone Decanoate (DECA) yakakosha inokwanisa kuvandudza masimba ekutapudza uye musimba kukura. Kushandisa steroid iyi kwemavhiki matanhatu kusvika masere kunobatanidza nekuwedzera kunoshamisa mukugadzirwa kwemasero matsvuku eropa uye kuporesa matambudziko akabatanidzwa anowanikwa nevamwe vatambi munguva yekushanda kwakasimba. Itero steroid inowanzoshandiswa panguva yekuwana mashoma kana zvikamu zvekudya uye ndeimwe yezvishoma steroid inogona kushandiswa mune zvose zviri kunze-mwaka uye musati mambakwikwi.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder Specifications
Product Name Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder
Kemikari Name Nandrolone decylate;19-Nortestosterone 17β-decanoate; 4-ESTREN-17BETA-OL-3-ONE 17-DECANOATE;4-ESTREN-17-BETA-OL-3-ONE DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE 17-DECANOATE;19-NORTESTOSTERONE DECANOATE;17BETA-HYDROXY-19-NOR-4-ANDROSTEN-3-ONE 17-DECANOATE
muchiso Name Deca-Durabolin
Molecular Wsere 428.65
Kunyorera Point 33-37 ° C
Kubikira pfungwa 483.46 ° C (yakawandisa kuongororwa)
ruvara Yakachena kusvika kuchena kristalline powder
Skukodzera 45% (w / v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg / mL
APane Pakutanga yakagadzirirwa kurapa vanhu vakaonekwa kuti vane muscle kuparadza zvirwere, Nandrolone Decanoate ine simba rekuvandudza mapfupa emasikati uye kukura kwemasumbu uye kunoshamisa zvikuru kuwedzera mapuroteni, nitrogen kuchengetedza, kushanda, nekutsungirira.
Chii chakakosha Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3)?
Nandrolone base inowanzogadziriswa kubva kumurume ekuberekorora hormone testosterone. Inogona kubatsira kuvakazve miviri yomuviri, kuwedzera muviri uye bone mapfupa uye kukurudzira kuumbwa kwemasero matsvuku eropa. Izvo zvinogonawo kuita kuti mutsara kukura, kuda kudya nekudya uye kuwedzerwa tsvuku dzeropa rekugadzirwa uye bone. Zvidzidzo zvekuchipatara zvakaratidza kuti zvinobudirira mukurapa chirwere chekushaya ropa, osteoporosis uye mamwe maitiro e neoplasia kusanganisira kenza yemazamu, uyewo anoita seprogestin-based contraceptive. Nandrolone inowanzoshambadzirwa nekutengeserana seyo decanoate ester (Deca-Durabolin) uye zvishoma nezvishoma se phenylpropionate ester (Durabolin).
Iyo Yakakura Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) mabasa
Nandrolone poda yakakosha is an anabolic steroid. Inoshanda kuburikidza nekuwedzera kukura kwemamwe mativi mumuviri uye yakaratidzwa kuvandudza kukwanisa kweurogi-kutakura ropa kuburikidza nekuwedzera hemoglobin uye kukura kwemasero matsvuku eropa.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) tizvishandise
Nandrolone Medical Medical Use
Nandrolone zvakare yakashandiswa kurapa osteoporosis kuvakadzi, maererano nevanoona nezvechiremba 'Chiremba Gwaro Rekushandisa. Nandrolone inovandudza collagen synthesis mumuviri uye inodzorera mararamiro emuviri we calcium kuburikidza nekusimbisa mapfupa emapfupa. Nandrolone zvakare yakashandiswa kurapa kenza yemazamu uye kuderedza zviratidzo zveAIDS, maererano neWiley InterScience website. Inoita izvi nekubatsira kudzivirira kuparara kwemafuta emuviri uye simba remuviri rinowanzokonzera varwere veAIDS.
Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) Benefits
Nandrolone inoshanda mukuwedzera mutsindo wetema uye kuwanda. Izvo zvinoita izvi nekubatsira muviri kushandisa chero mapuroteni anodyiwa zvakajeka. Migumisiro inowanzomira kwenguva pfupi uye kudya kwakanyanya kwazvo mumapuroteni kunodiwa kuti uwedzere mutema toni zvakakwana. Nandrolone inogona kuderedza nguva yekudzoka kubva pakukuvara uye kuwedzera maitiro ekudzivirira kuburikidza nekuderedza kuneta pashure pekuedza. Inoita izvi nekuwedzera huwandu hwemutsipa glycogen kudzokera shure mushure mekuoma kwehutongi hutongi.Izvi zvinoreva kuti vatambi vanogona kudzidzira kwenguva yakareba vasina kuneta. Kushandiswa kweNandrolone hakusi chete chigadzirwa chakakurumbira pakati pevarimi vemiti, asi chinoshandawo mukurapa kwehutano hwakasiyana-siyana. Zvigumisiro zvechirwere zvinosanganisira kukura kwemasumbu, kuda kudya nekudya uye kuwedzerwa tsvuku dzeropa rekugadzira uye bone. Zvidzidzo zvekuchipatara zvakaratidza kuti zvinobudirira mukurapa chirwere chekushaya ropa, osteoporosis uye mamwe maitiro e neoplasia kusanganisira kenza yemazamu, uyewo anoita seprogestin-based contraceptive.
Tenga Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3) kubva kuBuasas.com
Nandrolone Decanoate Uses, Purogiramu, Dosage, uye Zvinoshungurudza
Anabolic Therapy in Modern Medicine, William N. Taylor. MD, peji 75-120
Zvinodhaka, Vakatambi, uye Physical Performance, yakagadzirirwa naJohn A. Thomas, Peji 27-30
Osteoporosis: Pathogenesis uye Management, yakagadzirirwa naM RM Francis, peji 101-130
1 Kudzokorora nokuti Raw Nandrolone Decanoate (DECA) powder (360-70-3)
Chigadzirwa NANDROLONE DECANOATE (DECA) POWDER inobatsira zvikuru.